Kushandiswa kwecalcium formate muduri
na admin on 20-04-01
Inoshandiswa seyakakurumidza kumisa mumiriri, mafuta uye yekutanga simba mumiriri simenti. Iyo inoshandiswa mukuvaka dhaka uye akasiyana concretes kumhanyisa kumhanya kwekusimudza simende uye kupfupisa nguva yekugadzika, kunyanya mukugadzirwa kwechando kudzivirira iyo yekumhanyisa kumhanya kunonoka zvakanyanya pakadzika tembiricha. ...
Yakasarudzika echando-yakanyungudusa mumiriri imwe yemasirosi echando-kunyungudusa mumumiriri.
Yakasarudzika echando-yakanyungudusa mumiriri imwe yemasirosi echando-kunyungudusa mumumiriri. Iyo de-icing mumiririri iyo inoshandisa fomu sechinhu chikuru chikamu uye inowedzera dzakasiyana-siyana zvekuwedzera. Corrosivity zvakasiyana zvakanyanya kubva kune chloride. Maererano ne GB / T23851-2009 mugwagwa we-icing uye chando-nyungudusa mumumiriri (yenyika ...
KHIMIA Exhibition 2019
na admin on 19-06-08
16-19th, Sep, 2019, tiri mu KHIMIA yeRussia Booth No .: 22E24
Potasium fomu yekunyatsoshanda ichienzaniswa
na admin on 18-06-08
Potasium formate, formic acid munyu, inoshanda zvakanyanya kupfuura mamwe ma-de-icing vamiririri vakaita se: Potassium acetate Urea Glycerol Kufananidzwa ne potassium formate, inotorwa pakukwanana kwe100%, potasiamu acetate ine mashoma chete 80 kusvika 85%, zvichienderana nekushisa kuri kuitika. T ...
na admin on 17-06-02
Kuchera kwemagetsi simba uye zvigadzirwa zvakasvibiswa bhizinesi rakaoma uye rinoda. Anodhura ma rigs, anoremedza environmnets uye akaoma mamiriro geological anoita kuti ive yakaoma uye ine njodzi. Kuwedzera mukana wekubudirira kwemafuta negesi minda, mafomu ari kupa zvakanakisa kushanda uye zvakatipoteredza ben ...